Arsenal Waa Inay Iibisaa Ciyaaryahan Kale Oo Khadka Dhexe Ah Ka Hor Inta...
Arsenal Waa Inay Iibisaa Ciyaaryahan Kale Oo Khadka Dhexe Ah Ka Hor Inta…
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasban tahay inay iska dirto ugu yaraan hal ciyaaryahan oo khadka dhexe ah si ay ula soo saxiixato Houssem Aouar inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Gunners ayaa la rumeysan yahay inay dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay ciyaaryahanka reer France, kaasoo dhaliyay sideed gool isla markaana diiwaan geliyay afar caawin 33 kulan oo uu u saftay heer kooxeed intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Sida laga soo xigtay ESPN , kooxda Mikel Arteta ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo 23 jirkaan, laakiin waa inay iska iibiyaan ciyaaryahan kale oo khadka dhexe ah ka hor inta aysan dalab rasmi ah ka gudbin.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Lyon ay diyaar u tahay inay iibiso Aouar iyadoo lagu iibinayo lacag dhan € 25m (£ 21.4m) ka hor xilli ciyaareedka soo socda, taas oo noqon doonta qiimo dhimis weyn madama 60m (£ 51.3m) ah lagu qiimeenayay Sanadkii hore.
Matteo Guendouzi ayaa durbaba ka tagay garoonka Emirates, halka Martin Odegaard uusan soo laaban doonin xilli ciyaareedka soo socda ka dib amaah uu kaga soo qaatay Real Madrid.
Granit Xhaka iyo Lucas Torreira ayaa weli lala xiriirinayaa inay ka tagayaan halka Ainsley Maitland-Niles iyo Joe Willock la filayo inay diyaar u yihiin inay la wareegaan suuqa haatan jira.
Samuel Umtiti Oo Xiiso U Qabin Heshiis Kordhinta Kooxda Barcelona